खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यबारे आयो खुसीको खबर... -Dainikplus-
By Dainik Plus On September 24, 2019 In Parent Category
काठमाडौँ, ३ असोज : नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर ५० अमेरिकी डलर र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु २५ घटाएको हो ।अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर एक हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ । मूल्य घटेपछि ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ३५० कायम भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो ।पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही घटेको छ । सेप्टेम्बर १ मा इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको मूल्यअनुसार हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य घटेर आएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन भएसँगै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन टेवा पुग्ने निगमले विश्वास लिएको छ । via internet khabar
के हो एलपी ग्यास?
द्रवीभूत पेट्रोलियम ग्यास छोटकरीमा एलपीजी अथवा (LPG) लाई सामान्यतया खाना पकाउने ग्यास भनिए पनि यो ग्यास अन्य विभिन्न प्रयोजनमा पनि उपयोग गरिन्छ। एलपी ग्यास विभिन्न हाइड्रोकार्बन ग्यासको मिस्रित प्रज्ज्वलनशील पदार्थ हो जसको उपयोग विभिन्न तताउने उपकरणहरूमा इन्धनको रूपमा गरिन्छ।
र याे पनि पढ्नुसः किन पड्किन्छन् ग्यास? कसरी गर्ने सुरक्षा?
हालसम्म ग्यास पड्किएर ज्यान गुमाउनेको यकिन संख्या भने आधिकारीक निकायसँग छैन।त्यस्तै ग्यास सिलिण्डर पड्किएसँगै त्यसको छानविन गर्न बनेका समितिहरुले विभिन्न प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरेपनि त्यस्ता घटनाबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायका बारेमा भने आम उपभोक्तामा चेतनाको कमी देखिन्छ।त्यसैले हामीले नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतसँग त्यसबाट बच्ने उपायका बारेमा सोधेका छौँ।
एलपीजी ग्यासको सिलिण्डर पडकिनुका पछाडि रेगुलेटरबाट हुने ग्यास लिक प्रमूख कारण रहेको बताउँछन् गोइत। ‘सिलिण्डर जथाभावीरुपमा प्रयोग गर्ने, रेगुलेटर तथा चुल्होको नव राम्रोसँग बन्द नगर्ने जस्ता कारणले गर्दा खाना पकाउने ग्यास कहिलेकाँही पडकिने गरेको छ।’ गोइतले भने।गोइतको भनाईमा यसबाहेक कमसल तथा गुणस्तर प्रमाणित नभएका चुल्हो, रेगुलेटर, रबर पाइप जस्ता उपकरणका कारण पनि त्यसता घटना हुने गरेको पाइएको छ।त्यस्तै लामो समयसम्म सिलिण्डर बिना प्रयोग राखीराख्ने जस्ता कार्यले समेत सुरक्षाको जोखिम निम्ताउन सक्ने उनले जनाए।‘हामी कहाँ ग्यास स्टकमा राख्ने प्रवृति छ। कैयौं वर्षसम्म त्यसरी स्टकमा रहीरहने तर प्रयोगमा नआउँदा समेत त्यसले जोखिम बढाउने गर्छ।’ उनले भने
सिलिण्डर ल्याउँदा नगुडाउनुहोस। सकभर सुतीको कपडा लागएर मात्र खाना पकाउनुहोस। भार पर्नेगरी सिलिण्डरमाथि कुनै सामान नराख्नुहोस्। ग्यास भरिएको सिलिण्डरको भार बढी नै हुन्छ। त्यसमाथि सामान राख्दा भार थपिने भएकाले यसले जोखिम बढाउँछ।एउटै भान्सामा दुई वटा सिलिण्डर सकेसम्म नराख्नुहोस्। एकातिर खाना पकाइरहँदा अर्को सिलिण्डरबाट ग्यास लिक भएमा त्यो निकै जोखिम हुन्छ।सकेसम्म सिलिण्डरलाई साइडमा आधार दिने गर्नुहोस्। ताकि भुइँचालो जाँदा हुने कम्पनबाट सिलिण्डर नढलोस्। त्यसका लागि कुनो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिलिण्डरलाई कहिलै पनि ढलाएर वा कोल्टो पारेर नराख्नुहोस्।
सिलिण्डर भन्दा कम्तीमा ६ इन्च माथि ग्यास चुलो राख्नुहोस्। कहिलै पनि चुलोभन्दा सिलिण्डर माथि राख्नु हुँदैन। त्यस्तै ग्यासको रबर पाइप १.५ देखि २ मिटरभन्दा लामो हुनु हुँदैन्। सिलिन्डरमा ग्यास सकिनासाथ भान्साभन्दा बाहिर राख्ने गर्नुहोस् वा सम्वन्धित विक्रेतालाई बुझाउनुहोस्। पुराना सिलिण्डर प्रयोग नगर्नुहोस्।सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएको थाहा पाउनासाथ रेगुलेटर बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि लिक भएको ठाउँ पत्ता लगाउन पाइप, चुलो, रेगुलेटर वा सिलिण्डरको छुट्छाछुट्टै परीक्षण गर्नुहोस्। यदी सिलिण्डरबाटै लिक भएको भए चुल्हो, लाइटर, धुप तथा कोठाको बिजुली बत्ती निभाउनुहोस तथा सबै झेयाल ढोका खोलि ग्यासको मात्रा घटाउने तर्फ लाग्नुहोस्।
पाइपबाट लिक भएमा पाइप फेर्नुहोस्। लिक भएको पाइपलाई नै टेपले टाँसेर प्रयोग गर्ने मुर्खता नगर्नुहोस्। धेरै पुरानो पाइप प्रयोग नगर्नुहोस्। त्यस्तै रेगुलेटरबाट ग्यास लिक भएमा सिलिण्डरको भल्वमा सेटी क्याम्प लगाएर घर बाहिर खुल्ला ठाउँमा राख्नुहोस र नजिकको ग्यास विक्रेता वा सम्बन्धीत ग्यास उद्योगलाई खबर गर्नुहोस।रेगुलेटर नमिलेर वा बिग्रेर पनि ग्यास लिक हुन सक्छ। सिलिण्डर फेरिसकेपछि रेगुलेटर राम्ररी कँस्नुहोस, खाना बनाइसकेपछि बन्द गर्ने गर्नुहोस्।
आफ्नो भान्सामा प्रयोग भएको सिलिण्डरको म्याद जो कोही सर्वसाधारणले पनि सहजै हेर्न र पत्ता लगाउन सक्छन्। सिलिण्डरको घाँटीमा भएका ३ वटा लाम्चा डण्डीमध्ये एउटामा भित्रपट्टी सिलिण्डरको म्यादलाई जनाउनेगरी कोड राखिएको हुन्छ। सो कोडकै आधारमा सर्वसाधारणले सिलिण्डरको म्याद पत्ता लगाउन सक्छन्।यस्ता ग्यासको सुरुमा ए, बी, सी र डी मध्ये एउटा अक्षर लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि १६, १७, २०, २२, २५ आदि अंकहरु लेखिएको हुन्छ। यसकै आधारमा सर्वसाधारणले सिलिण्डरको म्याद थाहा पाउन सक्छन्।ए, बी, सी र डीले अंग्रेजीका क्रमशः ३–३ महिना जनाउँछ। एले जनवरी, फेबरुअरी र मार्च महिना जनाउँछ भने बीले अप्रिल, मे, जुन महिनालाई जनाउँछ। सीले जुलाई, अगष्ट र सेप्टेम्बर तथा डीले अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनालाई जनाउँछ।
एउटा सिलिण्डरको म्याद १० वर्षसम्म हुन्छ। १० वर्षपछि हाइड्रोलिक टेष्ट गर्नुपर्ने र ५ वर्ष म्याद थप्न सकिन्छ। तर ग्यास उद्योगहरुले भने हाइड्रोलिक टेष्टको मापदण्ड अवलम्वन नगरेको समेत पाइने गरेको छ।हाइड्रोलिक टेष्ट गरेपछि सिलिण्डर नचुहिने पाइयो भने मात्रै त्यो सिलिण्डर पुनः ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने नत्र कवाडीमा दिनुपर्ने हुन्छ। सिलिण्डरको म्याद सकिएपछि वा बीचमै चुहावट भएमा त्यसलाई मर्मत तथा वल्डिङ गरेर प्रयोग गर्न पाइँदैन।
सिलण्डरको म्याद मात्रै होइन, त्यसको तौल पनि धेरैलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। विभिन्न कम्पनीका सिलिण्डरको तौल फरक फरक हुने गरेको छ। फलामको तौल फरक फरक भए पनि त्यसले कुनै प्रभाव भने पार्दैन। केही सिलिण्डरको १४ र केही सिलिण्डरको १५ केजीभन्दा बढी तौल हुने गरेको छ।यो पनि सिलिण्डरमा स्पष्टसँग जनाइएको हुन्छ। सिलिण्डरको घाँटीमा रहेका तीन डण्डीमध्ये एउटामा वा घाँटीमुनि सुरुमा सिलिण्डरको तौल र त्यसको मुनि ग्यासको तौल १४ दशमलव २ केजी लेखिएको हुन्छ।
यसरी भान्सामा प्रयोग हुने सिलिण्डरको म्याद बुझ्न सकेमा यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि पनि सावधानी अपनाउन सकिन्छ।त्यस्तै सिलिण्डरमा फलामको तौल र ग्यासको तौल जोड्दा आउने कुल योगफल पनि सबैले चेक जाँच गर्नु जरुरी छ। यसबाट ग्यासको तौलमा कमी गराएर हुन सक्ने ठगीबाट जोगिन सहयोग पुग्छ नै सम्वन्धित पक्षलाई पनि सही तौल कायम राख्न दवाव पुग्दछ। जानकारी अवस्य सेयर गर्नुहोला। स्रोत सामाग्री सेताेपाटीबाट
बिहान उठेर कहिलै नगर्नुहोस् यी ४ काम, बेवास्ता गरे जीवनभर पछुतो